आभूषण सधैं स्त्री विशेषताहरु संग सम्बन्धित छ। तर, यो छैन साँचो हो। त्यहाँ बलियो सेक्स लगाउने गर्न खुसी हुनेछन् कि मूल र व्यावहारिक मुद्रा छन्। पनि गर्न धेरै सजिलो, उदाहरणका लागि, आफ्नो हातमा पुरुषहरु कंगन, तिनीहरूले एउटा अचम्मको हुनेछ आफ्नो भाइ, उपहार एक मित्र, एक प्रेम मान्छे। सजावट क्रूरता, पुरुष हुनुको घमण्ड मालिक रेखांकन। तिनीहरूलाई यस्तो तार, डोरी, छाला रूपमा उपयुक्त सामाग्री सिर्जना गर्न। हामीलाई अझ विस्तृत धेरै विकल्प, सबैभन्दा सरल र रोचक गरौं।
कंगन डोरियों हेर्छ लागि
कुरा हो, मानिसहरू लागि डिजाइन, संक्षिप्त सुरुचिपूर्ण र व्यावहारिक हुनुपर्छ। सुन्दर watchband - यी सिद्धान्तहरू Adhering, यो आफ्नै हातले एक कंगन, आभूषण को पुरुष संस्करण बनाउन सम्भव छ। तपाईंले सुरू गर्नु अघि, यो डोरी को आवश्यक लम्बाइ मापन र जिप carbine मा सुरक्षित गर्न, कलाई मापन गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि बुनाई सुरु गर्नुहोस्। यो गर्न, डोरी, दायाँ मा झूट, लिन यो एक जग बनाउन, र त्यसपछि यसलाई ल्याउन र लुपमा छोड्न। सबै कार्यहरू बाँयामा छ जो एक कर्ड संग बारम्बार छन्। परिणाम चिटिक्क टाँका को ढाँचा छ। काम अन्त्यमा यो डोरी कटौती र यो यति छ कि यो crumbling छैन छ लाइटर को सुझाव ह्यान्डल गर्न आवश्यक छ। यस्तो पुरुषहरु कंगन, आफ्नो हात अभियान मा एक Lifesaver बन्न सुरु, र यस्तो मुद्रा मालिक यसलाई आफ्नो हात मा लगाउन खुसी हुनेछन्।
धेरै लोकप्रिय लट कंगन Shamballa। तिनीहरूले महिला र पुरुष दुवैको लागि उत्तिकै उपयुक्त हो। तिनीहरूले धेरै सजिलै, रोमाञ्चक र सजिलो बनाईएको हो। धेरै मूल आफ्नो हात waxed वा छाला कर्ड बुना संग, पुरुषहरु कंगन हेर्न हुनेछ। हामी चुल्ठो हुनेछ जो सजावटी तत्व, रूप, तपाईं केहि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, धातु मोती, कीमती पत्थर वा उदाहरणका एक नट लागि पनि सानो भागहरु। यी सबै वस्तुहरू एक वर्ग गाँठ गाँठे बुनाई प्रयोग कर्ड लट छन्। यी कंगन स्वाभाविक संग संयोजन मा हात मा दिखेगा छाला embellishments।
तपाईं उहाँले आफ्नो मित्र मनपराएका एक पुरुष कंगन कसरी बनाउने सोच छ भने, त्यसपछि छाला को टुक्रा को हातमा ले। यो आभूषण सिर्जना लागि सबैभन्दा उपयुक्त सामाग्री छ। मुद्रा को निर्माण को लागि कालो वा खैरो मा छाला को स्ट्रिप्स आवश्यक पर्दछ। सजिलो विकल्प -, तार तिनीहरूलाई सोध्न काठ वा धातु को मोती संग सजाउनु। स्कर्ट समतल गाँठे बुनाई गाँठ प्रयोग सूत्रहरू बाट बुना गर्न सकिन्छ। मोडेल resembling Shambhala प्राप्त गर्नुहोस्। यदि तपाईंको मित्र - biker, उहाँले मानिसहरू अन्य गरेको कंगन को ठूलो लिङ्कमा हुनेछ, हातमा आभूषण टुक्रा ठूलो masculinity मालिक जोड हुनेछ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले कालो वा गाढा खैरो छाला देखि एक व्यापक workpiece बनानु गर्न आवश्यक छ। को फास्टनरों रूपमा Rivets वा तस्मा फिट। उपयुक्त thorns, तिनीहरूले गोंद संग संलग्न गर्न सजिलो हुन्छ। को कंगन ब्वाँसो, एक अजिङ्गर वा सेल्टिक rune प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ मा स्वाद र उपहार कसलाई व्यक्ति को प्राथमिकतामा Adhering, इरादा छ। यो सबै चुनिएको मोडेल र आफ्नो धनी कल्पना मा निर्भर गर्दछ।
Waldorf गुडिया - यो के हो?
आफ्नो हात संग प्लेट लागि मूल कवर बनाउने
होटल Tsambika रवि Archangelos2* (ग्रीस, रोड्स) मा: समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
तेल seborrhea। यो कसरी रोग सामना गर्न?
18 हप्ता गर्भवती - सुझाव र चाल
40 अस्पताल, मास्को। शहर अस्पताल मास्को № 40। मास्को मा शहर क्लिनिकल अस्पताल
मार्केटिङ अनुसन्धान भूमिका